IMFIHLO YESTAR TREK YOKUPHUMELELA: IMISEBENZI KAWILLIAM SHAKESPEARE - UMNIKELI
Ukufunda Kakubi Imilebe
U-Donald Ixilongo Jr
Awunamava kaShakespeare de umfunde kwiKlingon yoqobo.
-Gorkon, I-Star Trek VI: Ilizwe elingafunyanwanga
Inkwenkwezi yetrek ibhiyozele usuku lwayo lokuzalwa lwama-50 umva ngo-2016, kunye namacandelo amabini amatsha asasaza kulo nyaka- I-Star Trek: iPicard kwaye Ukufumanisa isizini 2-ayibonisi phawu lokucotha naliphi na ixesha kungekudala. Njengokuba ilungelo lokuloba ngokungenasibindi lingena kwikota yesi-3 yekota, ndiziva ndinyanzelekile ukuba ndiphonononge umsonto endisandula ukuwubona ubotshwe ngokunzulu kwilaphu Inkwenkwezi yetrek' Ubukho, kukho kwasekuqaleni, mhlawumbi eyona mfihlelo iphambili yempumelelo yayo eqhubekayo…
Imisebenzi kaWilliam Shakespeare.
Ubudlelwane phakathi kukaShakespeare kunye Inkwenkwezi yetrek indala njenge Inkwenkwezi yetrek ngokwayo. Ukusukela kwixesha lokuqala kuthotho lwantlandlolo, uShakespeare ubonakele, enika izihloko zeepththora (iDagger of the Mind, Isazela seKumkani, Zonke iiNtsuku zethu zangoku, kunye Nalo naliphi na elinye igama, ukubiza nje kodwa ukubetha). iyelenqe lokuqhekeka, kwaye njengomlingiswa abalinganiswa ngokwabo bahlonitshwa kwaye bayathanda ukucaphula nanini na ithuba livela.
U-Spock, ngokukodwa, unobumbano bokuqhekeza umgca kaShakespeare owexukileyo, uphawu olungabonakali kuphela kwisimo somzimba sikaLeonard Nimoy, kodwa kwi-AOS kaZachary Quinto kunye ne-Disco ka-Ethan Peck ijika kwiindlebe ezichukumisayo.
Kukho inkolelo yokuba uMacbeth kuthiwa uqalekisiwe, kwaye unelishwa ngokungangxamanga kuba, njengesiqhelo esidumileyo sokutsala isihlwele kodwa umboniso wasimahla ongena layisenisi, uhlala ubekwa ziithiyetha esele zikufuphi nentlekele. Oku kungachaza ukuba kutheni le yenye yemidlalo eyaphuncuka ku-dictator wokubulala u-Kodos, i-janky theatre troupe ibonwa isenza ukhenketho lwabo lomnqamlezo kwi-series yokuqala 'Isazela seKumkani, ngaphambi kokuba baqhubeke nokwenza isihloko sesiqendu -ukubonelela Hamlet Ukuqikelela ukuphela kwe-macabre.
Izinto zisenokuba zifikelele encotsheni yazo nge I-Star Trek VI: Ilizwe elingafunyanwanga Ifilimu egama emva komgca ovela eHamlet, apho ingxoxo kaShakespeare iyinxalenye enkulu yophuhliso lomxholo webali. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa omnye wabakhohlakeleyo nguKlingon okhathalelwe nguShakespeare, osenokuba nembono yokuba uShakespeare uyile nto yaseKlingon ikhokelele kuguqulelo lobomi bokwenyani lweShakespeare edlalwa kulwimi olusetyenziswayo lwesiKlingon ngabantu abasebenza kakuhle, kubandakanya i-Hamlet kunye ne-Ado eninzi malunga neNto .
uthotho lweendawo zoopopayi
Emva koko, igqala likaShakespearian kunye nenkwenkwe ephuphayo uPatrick Stewart waphoswa njengoKapteni uJean-Luc Picard Isizukulwana Esilandelayo , kwaye izinto ziye zatshona apho. Olu bambiswano luhlala lomelele kwaye lubonakala kuyo yonke indawo Ukuhamba ngenqwelomoya, iSithuba esiNzulu seThoba, iShishini , kunye Ukufumanisa . Okumangalisayo kukuba, la manqaku abonisa eyona nto ithintelweyo ekusebenziseni uShakespeare yinto ekhoyo ngoku kuStewart IPicard , nangona umntu enokuba nethemba lokuba banomdla wokuchitha ixesha labo kwidrama ephezulu.
UPatrick Stewart ungene I-Star Trek: iPicard . (UMat Kennedy / CBS)
Ke kutheni? Lowo ngumbuzo. Kutheni Inkwenkwezi yetrek ubuyile kaninzi eShakespeare kakuhle, kwaye kutheni isebenza kakuhle kubo? Kuthekani ngezi zinto zimbini, ngaphezulu, ezinokubonakala zahluke kakhulu, endaweni yokuba zihambe kunye njengeepesika kunye nekhrimu, iintlanzi kunye neetshipsi, okanye iqela lomyalelo weqela laseVulcan?
Masibe crass kuqala. Inkwenkwezi yetrek ngumboniso obekwe kwindawo enqabileyo emva kokunqongophala, kuluntu lwasemva kongxowa-nkulu, kodwa iyaqhubeka ukwenziwa kwindawo yongxowankulu abakufutshane apho i-dystopian apho abadali kufuneka balwe nezinto ezinamalungelo obunini, ubukhosi, kunye nokusetyenziswa ngokufanelekileyo. Enye yeempawu zikaShakespeare ezithandekayo, ezithandekayo zabanye amagcisa ayisiyiyo (nje) ingqondi yakhe, kodwa into yokuba waphila kwaye wasweleka kudala ngaphambi kokuba ilungelo lokushicilela lingene lalibonakala emehlweni kaWalt ​​Disney.
Imisebenzi kaShakespeare inokuthi kwaye icatshulwe, ibhekiswe kuyo, iphinde isetyenziswe, kwaye i-straight-up ikhutshwe ngumntu wonke kuba inokusetyenziswa ngokukhululekileyo nangubani na. Ukukhululeka kokunxibelelana nomsebenzi kaShakespeare kuluncedo, hayi ukwenzakalisa isikhundla sakhe. Abantu banokumxabisa ngokungakumbi ngokumfumana kwiindawo ezininzi ezintsha kunye nokumbona ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo.
UShakespeare uqinisekisile ukuba angahamba umgama. Indoda isadumile kwiminyaka engama-400 emva kokubhubha kwakhe, kubonakala ngathi akunakulindeleka ukuba ishushu eshushu sizophula naliphi na ixesha kungekudala, simenze ilitye lokuchukumisa elikhuselekileyo labalinganiswa abahlala kwikamva elikude ukuba babe ngumlandeli wabo. Ngesizathu esithile, kuncinci kakhulu xa abantu kwixesha elizayo bathanda izinto ezindala ngoku, kunezinto zeli xesha lethu.
Uthando lwabasebenzi be-Enterprise-D ngoShakespeare kunye noSherlock Holmes sele bebadala kakhulu ukusukela kwiminyaka yoo-90s kunombulelo kaTom Paris ngeglasi ze-3D (nangona iParis isebenza ngokungathandekiyo kodwa ichanekile ngokuqikelela ukuba nokuba ikude kangakanani ikamva loluntu. babe ngamakhwenkwe amhlophe angacacanga ngembali yeWWII.)
Oyena Kapteni wethu waseShakespearian, uPatrick Stewart, oqhule amashumi eminyaka eyinkwenkwezi yeRoyal Shakespeare Inkampani yayiyindawo nje yoqeqesho lomda obambeleyo wokugqibela, uneengcinga zakhe malunga nezi zinto zimbini zintle zinencasa kunye .
Xa ubuzwa kudliwanondlebe ( kunye no-Ian McKellan !) indlela uqeqesho lukaShakespearian olwamnceda ngayo kwiindawo zakhe zangaphandle, wayeneempendulo ezimbini ezikhawulezayo nezicacileyo.
Enye yayiziipokotho. Akukho zipokotho zingenisiwe Inkwenkwezi yetrek iyunifomu, uthi, njengoko kungekho zipokotho ku-Elizabethan tights. Ke, njengoCaptain Picard, ibindim omnye wabadlali kunye nabasebenzi abebesazi ukuba mabenze ntoni ngezandla zakhe, nto leyo ke phofu ayiyonto.
Olunye uncedo luye kwi-bane echazwe kakuhle kubomi bomdlali we-sci-fi: ukuhambisa i-technobabble engaqondakaliyo: Inkwenkwezi yetrek ingxoxo incoko yencoko ethile kunye nengxoxo kaShakespeare kunye nolwimi lwaluphakanyisiwe. Ezinye zazo kwindinyana, ezinye azikho.
Xa uhambisa ulwimi oluphakanyisiweyo, nokuba yimibongo yakudala okanye amandla okhuselo e-astromech, ukuqonda ngqo ukuba imigca yakho ithetha ntoni imicimbi engaphantsi kwendlela oyithethayo-yeyiphi imvakalelo esemva komgca, yeyiphi isingqisho kunye noxinzelelo olucetyiswa ngamalungu kunye neemitha zemigca .
UStewart unokuba nezona fakes zibalaseleyo zeShakespearian, kodwa uninzi lwabadlali abadlale iiKapteni kunye nabasebenzi kwiifranchise ezininzi zineziqendu zemidlalo yeqonga kwaye benza ixesha labo ukunyathela iibhodi ngeBard, kubandakanya uWilliam Shatner kunye noAvery Brooks.
Ukususela kwimveliso ye-1990. U-Andre Braugher njengo-Iago kunye no-Avery Brooks njengo-Othello. Ifoto ngu-Joan Marcus. #Yamkela pic.twitter.com/8nWJwGxvwj
-I Shakespeare Theatre Inkampani (@ShakespeareinDC) NgoFebruwari 24, 2016
Ngezo mpendulo zibonakalayo zisendleleni, sinokuqhubela phambili kwezo ngcinga zininzi ngakumbi kwaye zikho. Leyo yenye yezinto eziqhelekileyo uShakespeare kwaye Inkwenkwezi yetrek Ukwabelana -ukuxabisa ukudibanisa okungcwele kunye nokuqhelekileyo. Ngamaxesha onke kukho ixesha lokuhlekisa-nokuba yinto yokuhamba phakathi kwehlathi okanye i-holodeck adventure engalunganga- kwaye kuhlala kukho indawo yokuphonononga izinto ezingaqhelekanga zesini, kodwa phakathi kwezo zibonda zeentente, sijonge enkulu imibuzo: Yintoni eyenza umntu? Yintoni eyenza inkokeli elungileyo okanye inkosi elungileyo? Sizithethelela njani izenzo zethu kwezopolitiko nakwimfazwe? Umntu kufuneka enze njani? Ufanele aphile njani umntu? Ngaba umntu ufanele aphile konke konke?
Shakespeare kunye Inkwenkwezi yetrek Ababuzi imibuzo efanayo kuphela, kodwa baphonononga iimpendulo ezifanayo. Omabini la mabhunga omsebenzi atyala imali kwimixholo enamandla yobuntu. Ubuntu bungathetha izinto ezininzi, kodwa kwimeko yoncwadi ichaza umtsalane kunye, kunye nomnqweno wokujonga imida, yobuntu kunye nendalo yomntu. Kukwakhona ukuba, kwimisebenzi yoluntu, izinto ezithuthuzelayo zokuba abantu ngokuyintloko, bezantsi, kulungile.
Akunjalo Inkwenkwezi yetrek kananjalo uShakespeare akanantlonelo ebantwini yokwenza okubi kunye nokubi, kodwa unyanzelisa ukuba ukuntsonkotha kwabantu, amandla ethu angenasiphelo njengabantu ngabanye kunye nokudibanisa ukwenza izinto ezilungileyo okanye ezimbi ngokuyalelwa kuphela kukhetho lwethu, yeyona nto yenza okuhle izinto esikhetha ukuzenza zibalasele kwaye zibalasele.
Oo, ndiyayazi iHamlet. Kwaye into anokuyithetha ngokungathandabuzekiyo, ndiyathetha ngokuqinisekileyo: Yeka umsebenzi womntu! Isizathu esivakalayo! Hayi indlela engenasiphelo ngayo kwicandelo! Ngendlela, ekuhambeni, indlela evakalisa ngayo nencomekayo! Ngokwenza, injani ingelosi! Ngoloyiko, ufana nothixo!
Iphepha , S1E9 Fihla kunye noQ
Ukuba bonke ububi bufuna ukuba abantu abalungileyo bangenzi nto, ke xa abantu abalungileyo besenza okuhle, ububi abunakuze boyise.
UShakespeare wabhala iintlekele ezininzi, kodwa akukho ndawo yakhe apho ububi boyisa ngokuthe ngqo. Naxa amaqhawe ethu esifa, izenzo zabo zobugorha, okanye izenzo zobuqhawe zabo babangqongileyo, ziqinisekisa ukuba ububi abuhlali bengohlwaywa, kwaye likho ithemba ngomso ongcono.
Ngokukwanjalo, nokuba umnyama kwaye unobuhle obunjani bomzimba Inkwenkwezi yetrek fumana, okoko nje amaqhawe ethu azibophezele ukuhlala kwiminqweno ye-Federation akukho xesha lokubulala abantu abahamba ngerobhothi abanako ukohlula.
Ewe kunjalo, kwi Inkwenkwezi yetrek , nayiphi na ingxoxo yobuntu iyanzima kukuba abanye abalinganiswa ayingobantu konke konke kodwa ngabaphambukeli, ii-androids, okanye amafu asemajukujukwini anezinto ezifana nezithixo. Nangona kunjalo, njengoko uKirk efumanisa ngaphakathi i-Undis Ilizwe eligutyungelweyo;
Umzimkhulu: Spock, ufuna ukwazi into? Wonke umntu ungumntu.
Spock: Ndiyifumana loo ntetho… iyathuka.
Ukuqonda ukuba uKirk uzama ukuhambisa (ngolwimi oluqhelekileyo loluntu, nolusenziwa nguSpock naye) kukuba iimpawu esizidibanisa noluntu-imfesane, ukwazi, ukucinga, ubomi obunobutyebi obungaziwayo - bunokufumaneka kuyo yonke into iphela. Leyo yenye yezinto eziphambili ze Inkwenkwezi yetrek : Nantoni na odibana nayo kububanzi obude begalaksi, nokuba ingumntu ococekileyo okanye ocacileyo kunomndilili, okanye ibhakethi lokumisa umzimba elingu-goo, okanye imfumba yamatye aphilayo, inezinto ezininzi eziqhelekileyo kuwe kunomahluko, ukuba ungakhathala ngokubafumana.
UShakespeare, naye, wabhala malunga nokufana okusibophelela kwabo sinokubabona njengenye. NguShakespeare lo Datha, umlinganiswa owayedla ngokufuneka alwe ukungqina ukuzimela kwakhe kunye nobuntu, ebeka amabinzana xa ebuza, Ukuba uyandihlaba, andivuzisi na?
Imixholo evavanywa bubuntu inyanzelisa kakhulu. Ngokubanzi sonke sithanda ukulingana phakathi kwabantu, ubunkokheli obunobulungisa kunye nobulungisa, uvelwano novelwano phakathi kweenkcubeko neeplanethi. Ubugcisa obungaphelelanga nje ekuxhaseni ezi njongo, ezithi azinyanzelekanga kuphela kodwa zinokufezekiswa-ukuba ngumntu omnye, ukhetho olunye ngexesha-bubugcisa obuthanda ukwakha ikhaya lalo ezintliziyweni zethu, ubugcisa abantu ababuyela kubo kaninzi-njalo, ngothando olukhulu nangaphezulu kwe-mania encinci.
Shakespeare kunye Inkwenkwezi yetrek bobabini banabalandeli abazinikeleyo-abalandeli bexesha elide ababuyela ngokuphindaphindiweyo kule misebenzi befumana umvuzo ngokuntsokotha, ukufudumala, iziqhulo zika-dick, kunye nemiphumela ekhethekileyo ye-shoddy.
Nokuba yeyiphi na ingcaciso, ubudlelwane phakathi kukaShakespeare kunye Inkwenkwezi yetrek Lubambiswano olunesiqhamo oluye lwaqhubeka ngempumelelo kumashumi eminyaka. Ngamana ingaphila ixesha elide kwaye iphumelele kwabanye abaninzi.
Iqela Lokubekwa Lodwa
Iimfazwe Zeenkwenkwezi Ukunyuka Kwesibhakabhaka
imifanekiso yamakhulu amabini eedola
ally mcbeal robert phantsiey jr ecula
I-rosario dawson jessica jones isiqendu
Iimpawu ezilungileyo adam no eve
thanos akukho luvuko ngeli xesha